सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान
नेपालको सबै क्षेत्रमा कुरीति विद्यमान छ । केही कुरीति संस्कारगत छन् भने केही मनोगत । मनोगत कुरीतिलाई कठोर दण्डविधान प्रयोग गरेर सन्तुलित गर्न सकिन्छ भने सामाजिक कुरीति हटाउनका लागि सबै जागरूक, अझ दण्डाधिकारी व्यक्तिले विशेष चासो लिंदा न्यूनीकरण हुन सक्दछ । सामाजिक कुरीति भनेको परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार हो, यसर्थ यसमा समाजको बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिले कुरीतिलाई जारी राख्न चाहेमा कुरीतिको ढाकछोप सजिलै हुन्छ र कानुनी कडाइको पनि कुनै उपादेयता हुँदैन । यो कालक्रममा जागरूकता, शिक्षा, निरन्तर परामर्श, अवलोकन र बाहय हस्तक्षेपले मात्र नियन्त्रण हुनसक्छ । सामाजिक कुरीतिमध्ये सबैभन्दा नराम्रो अहिले बालविवाह रहेको छ । कतिपय ठाउँमा त बालविवाह एउटा परिवारका लागि अनिवार्य पनि भइदिन्छ । बालबालिका बढी उमेरका भए भने जोडी नपाउने, केटीलाई बढी उमेरसम्म घरमा राख्न नसकिने, घरमा राख्दा विद्यालय नै पठाउनुपर्ने, यसरी पढेलेखेका चेलीका लागि त्यस्तै वर खोज्नुपर्ने, त्यस्तो वर नपाउने, पाए बढी दाइजो दिनुपर्ने समस्याको निदान न राज्यले दिन सक्छ, न समाजले नै त्यसको मेसो मिलाउन सक्छ
देश विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार अपरिहार्य –मन्त्री श्रेष्ठ
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको ग्यारेन्टी गरे मात्र देशको विकास हुने कुरा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उत्तरदायी व्यवासायी सम्मान कार्यक्रम २०७० को पुरस्कार वितरणका लागि वीरगंज पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले समाजले शान्ति नबुझेको कारण देशमा शान्ति स्थापना हुन नसकेको बताए । आफू र आफ्नोभित्र रहेको शक्ति पहिचान गरेर देश विकासमा खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बेला जनताले अहिले विदेशिनु देशको दुर्भाग्य भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । व्यापारी, नेता तथा कर्मचारी भ्रष्ट भन्ने मान्यता नेपालको जनताले नत्यागेसम्म देशमा स्थायी शान्ति नहुने उनले बताए । उद्योग र मजदुरबीच सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नरही शत्रुताको भावनाको कारण उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका थिए । सरकारले शान्तिपूर्ण चुनाव गराएको, चुनाव परिणाम आइसके पनि सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूले ढिलाइ गर्नु जनताको भावनासँग खेलवाड हो–मन्त्री श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निर्वाधरूपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको सो
पाँच दिनदेखि गाउँ अन्धकार
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १५ पुस/ पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका १२ वटा गाविस ५ दिनदेखि विद्युत् अभाव झेलिरहेका छन् । जानकी टोलादेखि उत्तर निर्मलबस्तीसम्म आकलझुकल एकाध घण्टा मात्र बिजुली आउने गरेको छ । पोखरिया सबस्टेशनबाट वितरण गरिएको तीनवटा विद्युत् फिडरहरूमध्ये फिडर नंं २ मा पर्ने क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको हो । उक्त फिडरको विद्युतीय तार र पोलमा समस्या आएकोले सेवा प्रसारणमा अनियमितता आएको विद्युत् सबस्टेशन पोखरियाले जनाएको छ । बिग्रेको पोल र तार मरम्मत कार्य भइरहेको पनि सो कार्यालयले प्रतीकलाई जानकारी गराएको छ ।
सिजी कपको उपाधि होली एन्जल्सलाई
प्रस, परवानीपुर, १५ पुस/ दिल्ली पब्लिक स्कूल, वीरगंजले गत वर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको सिजी कप अन्तर्माध्यमिक विद्यालय फूटबल प्रतियोगिता यस वर्ष होली एन्जल्स निजगढले जितेको छ । विद्यालय परिसरमा रहेको मैदानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा गौतम मावि, वीरगंजलाई टाइब्रेकरमा २ गोलको विरुद्ध ४ गोल गरी होली एन्जल्सले उपाधि कब्जा गरेको हो । निर्धारित समयमा खेल १–१ गोलमा बराबरी भएपछि खेल टाइब्रेकरसम्म पुगेको थियो । आजको खेलमा म्यान अफ द म्याच निजगढका दिनेश थापा भएका थिए । विद्यालयका अध्यक्ष भिखमचन्द अग्रवालको सभापतित्वमा सम्पन्न पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा विजेता र उपविजेता टिमलाई शिल्ड, प्रमाणपत्र तथा मेडलहरू प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा दिलीप गुप्ताले सहजीकरण गरेका थिए ।
गणतान्त्रिक संंस्कारको खाँचो
- सञ्जय संयोग ‘संस्कार’ शब्दको आफ्नै महत्त्व छ । हामीले पाएको संस्कार कस्तो छ, जनहितमा छ कि छैन । त्यसले देश, समाज र व्यक्तित्वमा असर पार्छ । भर्खरै जन्मेको बालकलाई आमाबुबाले जस्तो संस्कार दिन्छन् त्यही अनुसार ऊ अगाडि बढ्छ अर्थात् आमाबुबाबाट सिकेका कुरा उसको ‘संस्कार’ बन्छ । ‘गणतान्त्रिक संस्कार’बारे चर्चा गरौं । विसं २०५२ सालमा केही नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू मिलेर एउटा आन्दोलन गरे– जसको नाम जनयुद्ध थियो । त्यो युद्धको मूल मर्म नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जनयुद्ध पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म फैलियो । जनयुद्ध झन्डै एक दशक जति चल्यो तर कुनै पनि युद्धको निकास वार्ताबाट नै हुन्छ भन्ने बुझेर तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आए । २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलन ज्ञानेन्द्रविरुद्ध र संसद् बहालीको माग राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको थियो । कोईरालालाले तत्कालीन माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अन्य पार्टीहरूसँग हातेमालो गरे जसको परिमाण ‘गणतन्त्र’ स्
पहिलो संविधानसभाकै कमजोरी दोहोरिंदै
- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव भनिन्छ अनुभवहीन मान्छेले काम गर्दा गल्ती हुनु स्वभाविक हुन्छ, जुन माफीलायक हुन्छ । एकपटक गल्ती गरिसकेको व्यक्तिले पुन: त्यही गल्ती गर्नु कि अटेरीपन हो कि मनसाययुक्त अपराध, जसलाई माफ गर्न कठिन हुन्छ । विगत संविधानसभामा भएको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो संविधानसभा गठन भएकोले विगतको कमजोरीयुक्त मार्ग किमार्थ अपनाउनुहुँदैन । यसले प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन र संविधानसभालाई पनि असफलतातर्फ डोर्‍याउँछ । विगतको संविधानसभामा एमाओवादी पहिलो दल भएकोले सही मार्गको नेतृत्व गर्ने उसको दायित्व थियो भने यतिखेर त्यो दायित्व काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ । यतिखेर अरूले जे गरे पनि जे भने पनि कमसेकम काङ्ग्रेसले विगतको कमजोरी दोहोरिन नदिन सजग रहनुपर्छ । तर दुर्भाग्य भनौं, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेजस्तो भएको छ । विगतको असफलताले ठूलो पाठ सिकाए पनि, जनमतले नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि विगतकै कमजोरी निरन्तर दोहोरिंदै गएको छ । जसले पुन: असफलताको निम्तो दिंदैछ । पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण थियो, सार्वभौम संविधानसभाभन्दा पनि शक्तिशाली चार नेताको उच्चस्तरीय राजनीतिक
अकर्मण्य मानिसले सधैं उदाहरणीय पात्रको खोजी गरिरहन्छ । लामो समयसम्म नेपालमा व्याप्त हत्या–हिंसा र सङ्क्रमण हटाउन बुद्धको खोजी गरिएको थियोस बुद्धजस्ता व्यक्ति एकपटक मात्र जन्मन्छन् भन्ने हेक्का बिर्सेर । देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्यान्य क्षेत्रमा पटक्कै उँभो लाग्न नसक्दा एकपटक छिमेकी राजनेता नीतीशकुमारको खोजी गरियो । खोजी अभियान यतिसम्म तीव्र भयो कि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै तारतम्य मिलाएर नीतीशलाई भेट्न गए । त्यसपछि भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भइरहँदा नेपालमा पनि अन्ना हजारेको खोजी गरियो । केही मानिसले अन्ना हजारे बन्ने कोशिश पनि गरे । अहिले नेपालमा अरविन्द केजरीवालको खोजी भइरहेको छ । यस खोजीको पछाडि बुद्धजस्तै काम गर्ने, नीतीशजस्तै नियम कानुनको परिपालना गराएर आफ्नो राज्यलाई प्रतिष्ठित बनाउने, अन्ना हजारेजस्तै प्राणपणले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउने वा केजरीवाल कसरी एकाएक राजनीतिक पटलमा देखिए भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न होइन, अपितु उनका कुरा चलाएर उनीहरूजस्तै बन्ने धोको नेपाली मानसिकतामा छरिएको हो । बुद्धले बुद्ध हुनका लागि आफ
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ, पर्साको अध्यक्षमा पटेल काम गर्नेलाई जिम्मेवारी–केन्द्रीय अध्यक्ष आचार्य
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ एनेकपा माओवादी निकट नेपाल क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ, पर्साको अध्यक्षमा आरके पटेलले निरन्तरता पाएका छन्। होटल मकालुको सभाकक्षमा आज सम्पन्न जिल्ला भेलाले पटेलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको हो। पुनर्गठित समितिको उपाध्यक्षमा कृष्णउदास खनाल, सचिव नीरज पीठाकोटे मगर, कोषाध्यक्ष महबुब आलम एवं सदस्यहरूमा लालबाबू बनियाँ, कविता मैनाली र मुनेश लायोमगर सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नवनिवार्चित अध्यक्ष पटेल यस अघि सङ्घको जिल्ला संयोजक थिए। सङ्घका केन्द्रीय संयोजक गोविन्द आचार्यको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न भेलामा क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा भोजपुरा संयोजक गोविन्द देवकोटा, केन्द्रीय सदस्य विष्णु सापकोटा र मधेस इन्चार्ज एनके दाहालको आतिथ्य थियो। सम्पन्न भेलाले सङ्घको केन्द्रीय अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिमा शेखर छतकुली, सुदर्शन राज पाण्डे, छठु साह र धमेन्द्र चौरसियालाई चयन गरेको र दुई स्थान रिक्त राखिएको जनाइएको छ। भेलालाई सम्बोभन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष आर्चायले सङगठन निर्माण तथा शुद्धीकरणलाई सङ्घले प्रथमिकतामा राखेर युद्धस्तरमा अगा
पत्रकार महासङ्घ सदस्यका लागि केन्द्रमा लबिङ गर्ने क्रान्तिकारी महासङ्घको निर्णय
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ नेकपा–माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घ, पर्साको अगुवा भेला आज वीरगंजमा सम्पन्न भयो। भेलाले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यताका लागि जिल्लामा देखिएको विवाद, आवेदक पत्रकारहरूको आन्दोलन र सहमतिबारे समीक्षा गरेको छ। सदस्यता प्रदानका लागि महासङ्घको शाखाले केन्द्रमा सिफारिस गर्ने नामहरूमा महासङ्घ, पर्सा शाखा र सिफारिसका लागि गठित समिति संवेदनशील हुनुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ। व्यावसायिक पत्रकारिताको मर्म र धर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सक्रिय र मापदण्ड पुगेका सञ्चारकर्मीहरूको नाम मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ। आफ्नो–पराई भेदभाव नगरी क्रियाशीलताको आधारमा निष्पक्ष किसिमले सिफारिस गर्न समिति र शाखालाई क्रान्तिकारी महासङ्घले सुझाव दिएको छ। पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएमा समस्या निम्तिने भन्दै महासङ्घको भेलाले त्यसतर्फ सचेत गराएको सङगठनका केन्द्रीय सदस्य सरोज खड्काले जानकारी दिएका छन्। क्रान्तिकारी महासङ्घ, पर्साका सहसंयोजक जगरनाथ साहको सभापतित्व एवं सदस्य राधेश्याम पटेलको सहजीकरणमा सम्पन्न भेलाले पर्सेली सञ्चारकर्मीहरूको हक अधिकार र ने
वीउवा सङ्घका पदाधिकारी र कोलकाता महावाणिज्य दूतावासका पदाधीकारीबीच भेटघाट
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी र भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र घिमिरेबीच छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सङ्घको सभाकक्षमा आज एक विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित विषयबारे विचार विमर्श भएको थियो। वीउवा सङ्घबाट उठाइएका तथा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूमाथि प्रकाश पार्दै महावाणिज्यदूत घिमिरेले हालै राजधानीमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी बैठक (आइजिसी बैठक)ले द्विपक्षीय व्यापारिक, आयात–निर्यातका सन्दर्भमा देखिएका बाधा अवरोध निरुपण गर्न सहयोग पुग्ने कुरा बताएका थिए। वीउवा सङ्घको सुझावप्रति गम्भीर रहेको बताउँदैं घिमिरेले सङ्घद्वारा प्रस्तुत समस्याप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। महावाणिज्यदूत घिमिरेले दुई पक्षीय अन्तर्सरकारी बैठकमा सहमति भएका बुँदाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। वीउवा सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार बैदको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष बैदले व्यापार तथा पारवहनको समस्या निराकरण गर्न महावाण्ज्यिदूत घिमिरेले गरेको पहल स
दोस्रो टी–२० मा कलैयाले अजहर मुम्बईलाई मात दियो
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १४ पुस/ मुम्बई क्रिकेट क्लबलाई कलैया क्रिकेट क्लबले हराउँदै दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा कब्जा जमाउन सफल भएको छ । सिद्धेश्वर खेल परिसर, कलैयामा शनिवारदेखि कलैया क्रिकेट क्लब र भारतको मुबईबाट आएका अजहर क्रिकेट क्लबबीच भएको टि–२० प्रतियोगिताको दोस्रो दिनको खेलमा कलैया क्रिकेट क्लबले अजहर क्रिकेट क्लबलाई १३ रनले पराजित गर्दै तेस्रो संस्करणमा पाइला चालेको छ। टस जिती ब्याडिङ गर्न ओर्लेको कलैया क्रिकेट क्लबले २० ओभर खेली ३ विकेटको क्षतिमा १५१ रन बनाएको थियो। कलैया क्रिकेट क्लबका लागि नेपालका पूर्वकप्तान विनोद दासले ५२ रनको योगदान गरेका थिए भने सुरज पटेलले ५० र अनिल साहले ३६ रन बनाएका थिए। मुम्बईबाट वाहिम पठान १, अनिल चौधरी १ र प्रमोद पाटिलले १ विकेट हात पारेको कलैया क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष उदित गुप्ताले बताए। १५१ रनको प्रत्युत्तरमा अजहर क्रिकेट क्लबले २० ओभर खेली ८ विकेटको नोक्सानीमा १३८ रन मात्र बनाउन सफल भयो। अजहर क्रिकेट क्लबका लागि महेश मोरेले ३०, भूषण पाटिलले २९ र महेश पाटिलले २० रन जोडेको जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष प्रभात चौरसियाले बताए। कलैया क्रिक
यसपालिको निर्वाचनमा आचारसंहिता पालनको सन्दर्भमा खर्चको मदमा बाहय तडकभडक नदेखिए पनि आन्तरिकरूपमा करोडौं खर्च भएको व्यापक चर्चा छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रत्यक्षतर्फका एकजना उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि रु १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने थियो। यसले यसपटक चुनाव प्रचारको बाहय गतिविधि शिथिल देखिएको थियो। पम्पलेट, पोस्टर, माइक, सवारीसाधन, भोजभतेर आदिमा खर्च नियन्त्रित देखिएको थियो, तर पर्सा जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुईजना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले दुई–दुई, तीन–तीन करोड खर्च गरेको सुनिएको छ। केही विपन्न उम्मेदवारहरूको कुरा छाडिदिने हो भने, अलि नाम चलेको राजनीतिक दलको हुँदोखाँदो उम्मेदवारले पनि कम्तिमा ५०/६० रुपियाँ खर्च गरेको छ। यसरी नगद रकम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भोट गरिद गर्नका लागि खर्च भएको हो। नोट लिएर भोट दिने अति विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू हुन्। तर के तिनको हातमा उम्मेदवारले दिएको सबै पैसा पर्‍यो होला त ? जसरी किसानले उब्जाएको अन्न, अन्य खाद्य पदार्थ उपभोक्तासम्म पुग्दा किसानले पाएको मूल्य दोब्बर हुन पुग्छ, त्यसैगरी यस्तो बेला दलालहरूले धेरै पैसा खाइ
शिक्षामा प्रविधि वा शिक्षाका लागि प्रविधि
अनन्तकुमार लाल दास शिक्षामा प्रविधि वा शिक्षाका लागि प्रविधि यी दुवै बिन्दुमाथि गहिरो छलफलको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु। प्रविधि मानिसको जटिल समस्याको समाधान गर्न सक्षम छ भने मानिसलाई दिमागी र शारीरिक कसरतबाट टाढा लग्दै आफूमाथिको निर्भरता बढाउँदै पङ्गु बनाइरहेको छ। यस आलेखमा प्रारम्भिक स्तरको गणित शिक्षणमा प्रविधि प्रयोगको सीमा के हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल गर्न खोजिएको छ। यस आलेखमा गणित शिक्षणमा कुन–कुन प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसको औचित्य र सीमाबारे पनि छलफल गर्न खोजिएको छ। समय सँगसँगै परिवर्तन भइरहेको र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रविधिको विकासले मानिसलाई पृथ्वी मात्र होइन, अन्तरिक्षलाई बुझ्न सक्षम बनाएको छ। वर्तमानमा केटाकेटीहरूलाई प्राविधिक उपकरणसँग खेल्नु, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु र त्यसको प्रयोग गरी पढ्नु बढी रुचिकर लाग्छ। उनीहरूको प्रविधिप्रति बढ्दो रुचि देखेर शिक्षणको लागि सही र उपयुक्त प्रविधिको चयन र सही तरिकाले प्रयोगबाट उच्च उपलब्धि हासिल गर्न सहायक सिद्ध हुन सक्छ। यस कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एउटा शिक्षकले प्रविधिको आवश्यकता बुझ्नु आवश्यक छ, तर त्
घरमैं पीडित छन् महिला, हिंसाका घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा आउँदैनन्
–सुरेश बिडारी घटना १ : १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहेकै समयमा २०७० मङ्सिर १५ गते बाराकी सरस्वती भारतीलाई आफ्नै पतिले जीउमा तातो खोले खन्याइदिएपछि उनी घाइते बनेकी थिइन्। बारा, डुमरवाना–४ भारतीचोककी ३५ वर्षीया सरस्वतीलाई ४५ वर्षीय पति थलबहादुरले शनिवार राति घरमा जुठो लोटाउँदै गर्दा भैंसीको लागि पकाएको खोले खन्याइ दिएका हुन्। तेर्‍ह वर्षको उमेरमा विवाह गरेर २३ वर्षसँगै बिताएको पतिबाट आफूले तीन वर्षयता हिंसा भोग्दै आएको उनी बताउँछिन्। सरस्वतीले मदिराले मातिएका पतिले तातो खोले खन्याइ दिएपछि न्यायका लागि भोलिपल्ट प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्। छिमेकी महिलासँगै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा आएकी सरस्वतीले पतिबाट लगातार हिंसा भोग्दै आएको गुनासो पोखिन्। तीन सन्तानकी आमा सरस्वतीले दुई छोरी र एक छोरामाथि समेत पतिले अत्याचार गर्ने गरेकोले सो अत्याचार सहन नसकेर १७ वर्षकै उमेरमा एक वर्षअघि जेठी छोरीको विवाह गरिदिएकी थिइन्। आर्थिक अवस्था दयनीय भएकोले घर चलाउन मजदुरी गर्दै आएकी सरस्वतीले शनिवार साँझ पनि घर बनाउने ठाउँमा इँटा बोकेर फर्केकी थिइन् । घटना २ : पर्सा बैरियाबिर्ता गाविस–६
सुरक्षा एकाइनजिकैको पसलमा चोरी, कोल्हवी बजार बन्द
प्रस, निजगढ, १३ पुस/ बाराको कोल्हवी–१ स्थित एक पसलबाट गएराति २ लाख ११ हजार नगदसहित साढे दश लाख मूल्य बराबरको लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल तथा अन्य सामानहरू चोरी भएको छ। विक्रम भाञ्जा रेडिमेड एन्ड जुत्तापसलमा चोरी भएको हो। प्रहरीले अहिलेसम्म चोरको पहिचान गर्न सकेको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्हवी र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कोल्हवीसँगै रहेको उक्त पसलमा चोरी भएपछि स्थानीय उद्योगी–व्यापारीहरू चिन्तित बनेका छन्। चोरी भएको पसल इलाका प्रहरी कार्यालयबाट करिब ३०० मिटर र सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पबाट करिब २०० मिटर नजिकको दूरीमा छ। चोरीको घटना र सुरक्षा निकायको ढिलासुस्तीप्रति विरोध जनाउँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घ कोल्हवीले आज कोल्हवी बजार बन्द गरेको थियो। सुरक्षाको माग गर्दै हाटबजार र पसल बन्द गराइएको थियो। प्रहरीले भरपर्दो सुरक्षा दिनुपर्ने र घटनामा संलग्न चोरहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको कोल्हवी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुकदेवप्रसाद साहले बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय, कोल्हवीका प्रहरी निरीक्षक मुकुन्दराज खरेलले घटनामा संलग्न चोरहरूलाई
प्रदूषणमुक्त वीरगंजका लागि जनचेतना दौड युवाशक्ति परिवर्तनका वाहक हुन्– अध्यक्ष यादव
प्रस, वीरगंज, १३ पुस/ वीरगंज हाफ म्याराथुन–२०७० आज सम्पन्न भएको छ। ‘प्रदूषणमुक्त वीरगंज– जनचेतना दौड’ नाम दिइएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ प्रिन्स मुखिया प्रथम, अरुण यादव द्वितीय, ललेशकुमार यादव तृतीय र नरेश राउत कुर्मीले सान्त्वना स्थान हासिल गरेका छन्। त्यसैगरी महिलातर्फ शिवाङगी कार्की प्रथम, विनीता थापा मगर द्वितीय, निशा गुप्ता तृतीय र दीपमाला गुप्ताले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेका छन्। ७ किलोमिटर दूरीको म्याराथुन दौड प्रतियोगितामा ८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेरसम्मका १३५ जना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका थिए। लायन्स एन्ड लियो क्लब वीरगंज होराइजनको आयोजनामा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको सहयोगमा सम्पन्न प्रतियोगिताको उद्घाटन तथा समापन समारोहमा मुख्य अतिथि मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादव थिए। सो अवसरमा अध्यक्ष यादवले युवाशक्ति समाज परिवर्तनको वाहक भएको बताउँदै वीरगंज नगरलाई प्रदूषणमुक्त गर्नका लागि युवाहरू जुटेकोमा प्रशंसा गरे। उनले समाजको नेतृत्वदायी भूमिकामा युवाशक्ति सक्रिय भएमा समाज विकासमा सहज हुने र नगरलगायतका गाउँटोलसमेत प्रदूषणरहित बन्ने विश्व
मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने षड्यन्त्र– उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल
प्रस, निजगढ, १३ पुस/ हालै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा २०४७ सालको संविधान बिउँताउन चाहनेहरूको दुई तिहाइ मत आइसकेकोले संविधानसभाले संविधान जारी गरेपनि २०४७ सालकै संविधानको पुनरावृत्ति हुने नेकपा—माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले बताए। शनिवार निजगढमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गजुरेलले अब प्रायोजित संविधान बनाउने षड्यन्त्र शुरू भएको र पुनरुत्थान तथा प्रतिगामी शक्तिहरू अनुकूलताको पर्खाइमा रहेका बताए। यथास्थितिमा चुनाव गरिंदा यस्तै परिमाण आउने आफ्नो पार्टीले पहिले नै ठहर गरिसकेकोले चुनावमा भाग नलिएको पनि उनले खुलासा गरेका थिए । एमाओवादीमा राजनीतिक दूरदृष्टिको अभाव रहेकोले सहजै षड्यन्त्रको शिकार बनेको गजुरेलको कथन थियो। यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिऊन् भनेर आफ्नो पार्टीले देशव्यापी हडताल गर्दा सबैभन्दा बढी एमाओवादीले नै उल्लङ्घन गरेकोले नेकपा—माओवादी एमाओवादीविरुद्ध खनिएको जस्तो उनीहरूलाई आभास भएको तर नेकपा–माओवादीले भने सबैका लागि बन्द गरेको उपाध्यय गजुरेलले प्रस्ट्याए । अब मुलुकलाई निकास दिनका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको आयोजना गर्नुपर्ने ज
उदय कप अन्तरविद्यालय क्रिकेटमा सेन्ट जोन्स र ज्ञानज्योति विजयी
प्रस, वीरगंज, १३ पुस/ नारायणी रङगशालामा हिजोदेखि शुरू भएको उदय कप अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सम्पन्न खेलमा सेन्ट जोन्स र ज्ञानज्योति मावि विजयी भएका छन् । आज भएको पहिलो खेलमा सेन्ट जोन्सले ज्ञान निकेतनलाई ६२ रनले पराजित गरेको थियो। निर्धारित २० ओभरको खेलमा ९ विकेट गुमाएर सेन्ट जोन्सले १२३ रन बनाएको थियो। प्रतिउत्तरमा ज्ञान निकेतन १७ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ६१ रनमैं सीमित भयो। पहिलो खेलको ‘म्याद अफ दि म्याच’ नाजिर हुसेन घोषित भएका थिए। उनले ४७ बलमा अविजित ६६ रन बनाएका थिए। यसैगरी दोस्रो खेलमा ज्ञानज्यातिले होलील्यान्डलाई ३२ रनको अन्तरले पराजित गर्‍यो। ज्ञानज्योतिले २० ओभरको खेलमा ९ विकेट गुमाएर १२० रन जोडेको थियो भने १२१ रनको लक्ष्य लिएर मैदानमा आएको होलील्यान्ड १७ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ८८ रनमैं सीमित भयो। दोस्रो खेलको ‘म्यान अफ दि म्याच’ आकाश गुप्ता भएका थिए।
युवा जीवनको महत्त्व
आज संसारमा चुनौतीहरू धेरै छन् तर समाधान भनेको एक छ, त्यो हो केवल युवा चेतनाको जागरण। युवाहरूमा सक्रियता आउनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ। जीवनको हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको साहसिक भागीदारी हुनुपर्ने आजको २१ औं शताब्दीको माग रहेको छ। प्रचण्ड साहस, प्रबल सङकल्प, अटुट धैर्यको साथमा विचारशील वा भावनाशील युवाले यदि आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएमा असम्भव समस्याको पनि समाधान सम्भव छ। तर आज युवाहरूको सक्रियता प्राय: गलत कार्यप्रति उत्सुक भएको पाइन्छ। यदि कोही युवा राम्रो कार्यमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्छ भने एकले अर्काको निन्दा गर्ने र आफ्नो गन्तव्य यात्राबाट विचलित हुने गरेको पाइएको छ। हामी अतीततिर जाऔं वा वर्तमानमा समाधान केवल युवा पींढीबाट मात्रै सम्भव छ। कुरा आजको होइन, अपितु धेरै वर्ष पहिलाको हो। युवा श्रीरामले अयोध्याको वैभवशाली राज्य छाडेर रावणको अनाचार, अत्याचारको विरोधमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेका थिए। उनको एकल पुरुषार्थको साथ दिनका लागि धेरैले अनायस मदत गरेका कारण अन्ततोगत्वा रावण पराजित हुनुपरेको थियो। श्रीकृष्णले आफ्नो किशोरावस्थामा नै अनेक असुरहरूलाई मारेका थिए। कुकर्मी कंसको पतनको लागि श्रीकृ
पारम्परिक ढुवानी साधन
उमाशङकर द्विवेदी आदिमानव शिकारी अवस्थामा रहेकै बेलादेखि विभिन्न सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि कुनै ढुवानी गर्ने साधनको खोजीमा लागेको थियो। आदिमानव शिकारको क्रममा प्राय: आफूभन्दा निकै ठूलो तथा भारी जानवरलाई मार्दथ्यो। यस्तो शिकार निवासको छेउमा हुँदैन्थ्यो। अथक परिश्रम र संयोगले मात्र शिकार हुने गर्दथ्यो, जुन बाक्लो वन वा पहाडको टुप्पो वा ढलानमा सम्भव हुन्थ्यो। आदिमानवले शिकारस्थलमैं मासु चोक्टयाउँथ्यो, सके जति त्यसै स्थानमा आगोले पोलेर खान्थ्यो तथा उब्रेको मासुलाई महिला, ससाना बच्चा र वृद्धहरूको आहाराका लागि बोकेर ल्याउन समस्या हुन्थ्यो। सम्भवत: ढुवानीको साधनको कल्पना त्यतिबेलै भएको थियो जस्तो लाग्दछ। मानव शक्तिको सहायताले त्यो मासुको भारी बोकेर निवासस्थानसम्म ल्याइ पुर्‍याउन निश्चयत: कष्टप्रद तथा श्रमसाध्य काम थियो। बिस्तारै शिकारी आदिमानव पशुपालन तथा कृषि काम पनि गर्न थालेको थियो। शिकार, पशुपालन तथा कृषि पैदावरको कारणले भोजन पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुन थाल्यो। पर्याप्त भोजनको आपूर्ति हुन थालेपछि मानव मस्तिष्कको पनि विकास हुन थाल्यो। अत: ढुवानी जस्तो कष्टप्रद तथा श्
को बन्छ प्रधानमन्त्री ?
नीरज गुप्ता भारतीय टेलिभिजनको बहुचर्चित रियालिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपति’ मा अमिताभ बच्चनले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्। सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रतियोगी भारु ७ करोड जितेर करोडपति बन्छन्। प्रतियोगीहरूलाई प्रश्नको सही उत्तर दिन विभिन्न किसिमको जीवनरेखाको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो प्रसङग जोड्नुको कारण हरेक चार/पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’को प्रतियोगिता अर्थात् निर्वाचन गराउँछ र विजयी हुने दलको एक उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बन्छन् । ‘कौन बनेगा करोडपति’ र हाम्रो देशमा हुने ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’को बीचमा केही अन्तर छ भने त्यो हो ‘कौन बनेगा करोडपति’ कार्यक्रम वर्षैभरि हुन्छ तर ‘को बन्छ प्रधानमन्त्री’ भन्ने निर्वाचन हरेक चार/पाँच वर्षको मध्यावधिमा हुन्छ । कौन बनेगा करोडपतिका प्रतियोगीहरू मिहिनेत, बौद्धिक ज्ञान, अध्ययन र धैर्यताले करोडपति बनेका हुन्छन् भने हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू छलकपट, विपक्षीलाई तह लगाइ, विदेशी प्रभुको अगाडि शिर निहुर्‍याइ, गरिब निमुखा जनतालाई भ्रम र आश्वासनमा पारेर प्रधानमन्त्री भई क
नेपाल–भारत व्यापार मेलाको तयारी पूरा
प्रस, वीरगंज, १२ पुस/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आगामी फागुन १ देखि ८ गतेसम्म वीरगंजमा नेपाल–भारत व्यापार मेलाको आयोजना गरिने भएको छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत व्यापार मेला–२०१४ उद्योग वाणिज्य सङ्घको मूल आयोजनामा र नेपाल–उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल सरकार, वीउमनपा, जिविससमेतको आयोजनामा आदर्शनगर र·शालामा ८ दिनका लागि आयोजना हुने बताए । उनले सो मेलाबाट करिब २० करोड मूल्य बराबरको कारोबार हुने दाबी गरे । मेलामा नेपाल–भारतका लगानीकर्ता, उत्पादक, वितरक, निर्यातकर्तासमेतलाई एउटै मञ्चमा भेला गराउने व्यापार मेलाको मूल उद्देश्य रहेको बताए । उनले मेलामा औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, साना तथा लघु उद्यम, वित्तीय संस्थालगायतका उत्पादन तथा सेवाहरूका दुई सय स्टलहरू रहने बताए । मेलामा सूचना कक्ष, सञ्चार कक्ष, प्राविधिक सेवा कक्ष, मरम्मत सम्भार कक्ष, २४ सैं घण्टा सुरक्षा व्यवस्था र प्रदर्शनीभित्र सञ्चारकर्मीहरूका लागि १० वटा स्टलहरूको व्यवस्था मिलाइएको महासचिव गोपाल केडियाले बताए । कार्यक्रमको मिडिया पार्टनरको रूपमा नेपाल पत
निजगढ विकास समितिले अझै हिसाब सार्वजनिक गरेन
प्रस, निजगढ, १२ पुस/ पाँच वर्ष बित्न लागेपनि निजगढ विकास समितिले हिसाबकिताब अझै सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय क्रसर उद्योग र त्यसबेलाका इँटा उद्योगबाट अन्यत्र लैजाने रोडा, गिट्टी, इँटा निकासीबापत उठाइएको कर रकमको खर्च विवरण समितिले हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । करिब अढाई वर्षको डेढ करोडभन्दा बढी रकम समितिमा सड्ढलन भएको स्रोतले जनाएको छ । तर के कति रकम कुन कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ सोबारे समितिले सार्वजनिक गरेको छैन । सड्ढलित रकमहरू उचित शीर्षकमा खर्च गर्न नसक्दा अहिले समितिलाई समस्या परेको सचेत स्थानीय व्यक्तिले अड्कल गरेका छन् । दीर्घकालीन योजनाबिना जथाभावी रकम खर्चिंदा समस्या जटिल बन्दै गएको बताइन्छ । निजगढ विकास समितिको नाममा रकम सड्ढलन गर्नु ऐनविपरीत भएपनि निजगढको बृहत्तर हित र विकासका लागि रकम सड्ढलन गर्दा कसैले अवरोध गरेको थिएन । निजगढ विकास समितिको गठनसँगै कार्य थालनी भएपछि उचित स्थानमा रकम खर्च नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । सड्ढलन भएको रकम खोलाको ड्याम निर्माण र सिंचाइमा खर्च गर्दा राम्रो हुने बताइन्छ । समितिका केही पदाधिकारीहरूकै मनोमानीका कारण अन
उदय कपमा ज्ञानज्योतिको विजयी सुरुआत
प्रस, वीरगंज, १२ पुस/ नारायणी र·शालामा आजदेखि शुरू भएको उदय कप अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा ज्ञानज्योति उच्च माविले गौतम माविलाई पराजित गरेको छ । गौतम मावि ३५ रनको अन्तरले पराजित भएको हो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको ज्ञानज्योतिले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाउँदै १३६ रन बनाएको थियो । १३७ रनको विजयी लक्ष्य लिएको गौतम माविले १८ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १०१ रन मात्रै बनाउन सक्यो । उद्घाटन खेलमा ज्ञानज्योति उच्च माविका ऋतिक सर्राफ ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए । यसैगरी क्षेत्ररक्षणमा गौतम माविका नदिम हुसेनले ‘कमाल क्याच’ लिएका थिए । ‘उत्कृष्ट छक्का’को उपाधि ज्ञानज्योतिका राकेश कलवारले पाएका थिए । युनाइटिङ डेभलपमेन्ट एन्ड युथ क्लबद्वारा आयोजित उदय कप अन्तरविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगितामा पाँचवटा विद्यालय सहभागी छन् । प्रतियोगिता लिगका आधारमा खेलाइने आयोजक क्लबले जनाएको छ । भोलिको खेल बिहान ९ बजेदेखि सेन्ट जोन्स र ज्ञान निकेतन तथा दोस्रो खेल दिउँसो १ बजेदेखि होलील्यान्ड र ज्ञानज्योति उच्च माविबीच हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्
आयुर्वेद र हाम्रो स्वास्थ्य
- डा. रमेश मिश्र शरीर, मन, आत्मा र वातावरणको क्रियात्मक संयोगबाट स्वास्थ्य निर्माण हुन्छ । आयुर्वेद एउटा जीवन विज्ञान हो । यस नाताले आरोग्यको संरक्षणबाट रोगबाट बचाउने काम पनि गर्दछ । आयुर्वेदको प्रयोजन नै हो स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा र रोगीको रोग उपचार । स्वास्थ्य अनुशासन (हाइजीन) जसमा आहार विहारसम्बन्धी दिनचर्या, ऋतुचर्या र सदाचारको विस्तृत विवरण छ । जुन आयुर्वेदको विषय हो । धारणीय वेग र अधारणीय वेगसम्बन्धी नियमको पालनाबाट आरोग्य प्राप्त हुन्छ । यहाँ हामी केही अधारणीय वेगको चर्चा गर्नेछौं । शरीर स्वस्थ रहन हाम्रो शरीरमा प्राकृतिकरूपमैं केही क्रियाहरू भइरहेका हुन्छन् । ती क्रियाहरूलाई प्राकृतिकरूपमैं चल्न दिनुपर्छ । यदि हामी यसको विरोध अर्थात् दबाउने काम गर्छौं भने हामी रोगी हुन्छौं । हाम्रो शरीरमा अधारणीय वेगहरू यस प्रकारका छन्, जसलाई रोक्यौं भने हामी रोगी हुन्छौं । मूत्रको वेग रोकेमा मूत्रकष्ट, पथरी, मूत्राशयको क्रियाहीनता एवं शोथ हुन्छ । पुरीषको वेग अर्थात् दिसा रोकेमा उदरशूल, अजीर्ण, पेटमा वायु, टाउको दुख्ने, पेटमा व्रण हुन्छ । अपानवायुको वेग रोकेमा अ
भगवान् शङ्कर र अर्जुनबीचको युद्ध
- उमाशङ्कर द्विवेदी वनवासको समयमा युधिष्ठिरद्वारा प्रेरित भएर अर्जुन हिमालय पारी एउटा ठूलो र घना ज·लमा गई कुशाको वस्त्र, दण्ड, मृगछाला र कमण्डलु धारण गरी तपस्या गर्न थाले । तपस्याको पहिलो महिना उनले तीन दिन बिराएर रूखबाट झरेका पात खाए । दोस्रो महिनामा छ दिन बिराएर र तेस्रो महिनामा पन्द्रह दिन बिराएर रूखबाट झरेका पात खाएर दिन बिताए । चौथो महिनामा उनले आफ्नो बाहु उध्र्वाकार रूपमा उचालेर केवल हावा पिएर तपस्या गर्न थाले । नित्य जलमा नुहाउनाले उनको कपालको र· पहेंलो भयो । ठूल्ठूला ऋषिहरू भगवान् शड्ढरसमीप गएर प्रार्थना गर्दै भन्न थाले,“भगवन्, अर्जुनको तपस्याको तेजले सम्पूर्ण दिशाहरू धूमिल भइसके ।” भगवान् श·रले उनीहरूसित भने,“म आज अर्जुनको इच्छा पूर्ण गर्नेछु ।” ऋषिहरू भगवान् शड्ढरबाट आश्वासन पाएर फर्केपछि भगवान् शड्ढरले सुनभैंm चम्किलो शरीर बनाएर किराँतको रूप धारण गरे । सुन्दर धनुष तथा सर्पाकार वाण लिएर पार्वतीका साथ अर्जुनको छेउमा गए । धेरै भूतप्रेतहरू पनि आफ्नो भेष परिवर्तन गरेर किराँत र किराँतिनीहरूको रूपमा उनको पछि पछि लागेका थिए । किराँत भेषधारी भगवान् शड्ढरले अर्जुनको छेउमा आएर देख
– घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ प्ेरम हो खुशी प्ेरम त्रासदी प्ेरम रोग हो प्ेरम औषधि रोक्नु हुन्न है बााध फुट्तछ बग्न देऊ यो प्ेरमको नदी प्ेरमबिना शिशिरजस्तो लाग्दछ प्ेरमले जीवन हुन्छ शारदी या दु:खान्त आख्यानजस्तो होस् या त प्ेरम होस् सौख्य कामदी प्ेरम स्वार्थले ग्रस्त आज छ भन्दछिन् सबै बीच द्रौपदी
बज्जिका लोक कवित् : सामान्य परिचय
- सञ्जय साह ‘मित्र’ लोक साहित्यलाई साहित्यको जनक भनिन्छ । हरेक सभ्य जाति, समाज, संस्कृति, भाषा तथा साहित्यको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने लोक जीवनको कुनै न कुनै अङ्गको सहायतालाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । लोक जीवनलाई यसै कारण साहित्य, संस्कृति तथा भाषाको मूलरूप मानिन्छ । आज विज्ञान र प्रविधि तथा आधुनिकताले निकै नै विकास गरेको भएपनि लोक जीवनमा प्रचलनमा रहेका जीवनको हरेक क्षेत्र र पक्षका कुरालाई पूरै विस्थापित गर्न सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा पुरानो कुराको महत्त्व अझ बढेर गएको छ । लोक जीवनमा प्रचलनमा रहेका बहुमूल्य मानवीय सम्पदाहरूको खोजी, संरक्षण तथा उपयोगी बनाउने दिशामा कतिपय लागिपरेका पनि छन् । राज्यको विभिन्न निकायले समेत कतिपय अवस्थामा यस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्रीको खोजी र संवद्र्धन गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि लोक साहित्यको क्षेत्रमा बर्सेनि विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ । कुनै पनि भाषाको लोक जीवनमा परम्परादेखि चल्दै आएको साहित्य लोक साहित्य हो । लोक साहित्य अलिखित अर्थात् मौखिक परम्परामा आधारित हुन्छ । लिखित परम्पराको आरम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखि चलेको र ग्रामीण क
मधेस र मिडिया
-चन्द्रकिशोर नेपाली भूगोलमा चुरे शिवालिक पर्वतमालाको दक्षिण तटीय मैदानमा परम्परागत बसोवास गर्दै आएका फरक भाषा र धर्म बोकेका गैरनेपाली मातृभाषीहरू जसको साझा सांस्कृतिक अन्तरप्रवाह र आर्थिक आधार रहेको छ र उनीहरू यही पृष्ठभूमिका कारण पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै संरचनागत विभेदका सिकार भएका छन्, उनीहरू मधेसी हुन् । नेपाली राष्ट्रिय जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा मधेसीहरूको सहभागिता र भूमिकाको खोजी गर्न थालिएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि मधेसीहरूको उपस्थिति उनीहरूको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको तुलनामा कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नभित्र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा कति सङ्ख्यामा मधेसीहरू छन्, उनीहरू निर्णायक तहमा कति छन् र उनीहरूलाई के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको छ, के कति मधेसीहरूको रुचि र आवश्यकतालाई बुझेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको छ जस्ता सवालहरूमा बढी घोत्लिन थालिएको छ । मधेसका भाषाहरूले नेपाली मिडियामा कुन तहमा स्थान पाइराखेका छन् र ती भाषाहरूलाई कतिको स्थान दिइएको छ । मधेसका मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारूलगायतको मिडियामा कतिको प्रस्तुत
‘टाउको तँलाई पुच्छर मलाई’ बराबरी हुँदैन
– कुमार रुपाखेती काङ्ग्रेस र एमाले पुराना झगडिया हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बाइचान्स यिनीहरू प्रथम र द्वितीय भएपछि यिनको फुर्ती बढ्नु स्वाभाविकै हो । तृतीय श्रेणी अर्थात् गाँधी क्लासको एमाओवादी रन्थनिएको छ । राजनैतिक खुराफात गर्न काङ्ग्रेस–एमालेपछि ए माओवादीसमेत ‘हम किसी से कम नहीं’ को हैसियत राख्दछ । कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएकोले नेपाली राजनीति फेरि पनि ‘मजबुरीका नाम महात्मा गाँधी’ स्तरमा घस्रिने निश्चितप्राय: छ । किनभने पुराना झगडिया काङ्ग्रेस र एमालेहरूमा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने जन्मजात प्रवृत्ति छ । निर्वाचन परिणामपछि एमालेले आफूलाई काङ्ग्रेसको बराबरी नठाने पनि ‘हाराहारीको औकात’ भएको ठान्दछ । त्यसैले त उसले क्रमश: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा आफ्नो दाबेदारी देखाउन थालेको छ । एमाले अब न ‘माछा–माछा भ्यागुतो’ भनेर मान्छ, न ‘टाउको मलाई पुच्छर मलाई बरोबरी भयो’ भनेर नै मान्नेवाला छ । संविधानसभा निर्वाचन सकिए पनि यसको राप र ताप अझै सेलाएको छैन । चुनाव जितेपछि सरकार जित्ने होडबाजी चालू छ । भागबन्डाको राजनीति हाम्रोमा पुरानै प्रथा हो । तर यसपटक अंश
विद्यार्थी–शिक्षक एउटै स्तर, गुणस्तर सोत्तर
- बैद्यनाथ ठाकुर यसै हप्ता लामो समयको अन्तरालपछि जिल्ला शिक्षा समिति, पर्साले पूर्णता पाएको छ । समितिले केही आशलाग्दो कामहरू गरेको छ । विद्यार्थी नै नभई त्यत्तिकै तलबभत्ता राज्यको कोषबाट सिध्याइरहेका विद्यालयहरूलाई खारेज गरेर हुने ‘बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । पर्सामा शैक्षिक माफियाहरूले गर्दा सामुदायिक विद्यालयभित्र पठनपाठनको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको कोहीबाट लुकेको छैन । वर्षौदेखि विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलानको कार्य हुन सकेको छैन । कतै धेरै विद्यार्थी र थोरै शिक्षक भएर पठनपाठन नकारात्मकताको शिकार भएको छ भने कतै थोरै विद्यार्थी र धेरै शिक्षकको थुप्रोले अनावश्यक विवादहरू सिर्जना भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । राजनीतिक भागबन्डामा गठित जिल्ला शिक्षा समितिले जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न राजनीतिक दबाब र शैक्षिक माफियाहरूको विभिन्न षड्यन्त्रविरुद्ध उभिनुपर्ने चुनौतीहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । आशा गरौं, समितिले पर्सामा शैक्षिकस्तर उकास्न कोसेढु·ाको काम गरोस् । गतहप्ता वीरगंजका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवा तथा